Indlela yokubeka ixesha kwi-Instagram kwi-app | Izikhokelo ze-Android
Indlela yokuseta ixesha kwi-Instagram kwi-app
UNerea Pereira | 06/05/2021 08:41 | Instagram
I-Instagram yenye yezicelo eziphambili kwicandelo leendaba kwezentlalo. Ngakumbi nangakumbi abasebenzisi bajoyina le foto kunye nevidiyo, engayeki ukufumana uhlaziyo kunye nemisebenzi ukuze ukwazi yenza izihluzi ezintsha, ukuphucula ukusetyenziswa kweapp kunye nokunye. Kungenxa yoko le nto kungekho mntu unokumelana nokuba ubuncinci kwiprofayile kwi-Instagram. Kwaye ngoku, kukho umsebenzi omtsha obonakala ngathi uza kuhlala nathi, i Ixesha le-instagram.
Ayiloxesha lokuqala ukuyibona, kodwa emva kokuba ilixesha lokulingwa, wanyamalala kukhetho kumabali e-Instagram. Kodwa ekumangaliseni abaninzi, ibuyile, kwaye ayisixesha lokuthatha iifoto, kodwa isibali maxesha sokuhambisa umnyhadala. Okulandelayo, siza kukuxelela konke malunga nalo msebenzi.
1 Ayililo ixesha lesifoto
2 I-Instagram timer ibuya
2.1 Le yindlela i-Instagram timer esetyenziswa ngayo
Ayililo ixesha lesifoto
Bambalwa abanqwenela oko I-Instagram idibanisa isibali ngexesha ke unokubeka ifowuni yakho kwindawo ethile kwaye uye kuma ngaphandle kokucela nabani na ukuba athathe umfanekiso. Ngokumalunga noku, eyona nto intle onokuyenza kukusebenzisa ixesha eliqhelekileyo lekhamera ye-smartphone yakho kwaye uyipapashe kumabali akho, ewe ushiya izihluzi zeapp.
Ezona zicelo zine zibalaseleyo zokuvula amandla e-Instagram
Olunye ukhetho kukukhetha ukhetho olungenazandla, ekunikeza malunga nemizuzwana emithathu yelungelo, ukurekhoda ngokwakho usebenzisa isihluzi osifunayo uze ukhuphele ividiyo ukubamba izakhelo ozithandayo. Kodwa oku akunanto yakwenza nesibali xesha esiza kuthetha ngalo ngokulandelayo.
I-Instagram timer ibuya
Njengoko besitshilo, ayiloxesha lokuthatha iifoto nge-Instagram, njengoko kungumsebenzi ongekabandakanywa. Ukusebenza okutsha kwevidiyo nevidiyo app ayisiyonto intsha, njengoko besikwazi ukuyibona ngaphambili, khange inikwe ingqwalaselo enkulu. Into elungileyo kukuba uyisebenzise ilula ngokwenyani, kwaye abalandeli bakho baya kuba nakho ukugcina iso kule timer.
Ukuba awukayisebenzisi okwangoku, awuyazi ukuba yenzelwe ntoni kunye nabanye, siza kukushiya ngesikhokelo esifutshane ngayo yonke into echazwe kakuhle ukuze ungathandabuzi ngokusebenza kwayo. Uya kubona ukuba ukusukela ngoku kuya kubakho umntu oya kulibala usuku lwakho lokuzalwa, okanye umsitho obalulekileyo ekufuneka ukhunjulwe ngabahlobo bakho.
Le yindlela i-Instagram timer esetyenziswa ngayo
Into yokuqala kuya kufuneka uyenze ukusebenzisa i-Instagram timer yile thatha ifoto okanye ividiyo kumabali akho. Nje ukuba ugqibile, uya kubona ukhetho oluqhelekileyo phezulu komfanekiso, kwaye kuya kufuneka ukhethe enye enobuso obunoncumo. Nangona unokukhetha ukuthatha ifoto okanye ividiyo ngekhamera ye-smartphone yakho okanye ukhethe enye kwigalari yakho kwaye uyilayishe kumabali.
Ngoku uyenzile le kwaye ukhethe iqhosha lobuso obunoncumoUya kubona ukuba uninzi lweendlela osele uzazi ziyavela, i-GIF, ii-Stickers ezifakiwe, ukukhankanywa, umculo kunye nabanye. Kodwa ngoku uza kubona inketho entsha, isibali-xesha, nangona elo ingelilo igama laso kwi-app, iyatsho ukubala.
Ungazi njani ukuba uvaliwe kwi-Instagram
Nje ukuba ukhethe, kuya kufuneka beka indoda apho iilebhile ikuxelela khona. Xa usibhalile, chukumisa ukhethe umhla kunye nexesha lokuphela komsitho. Kwimeko apho ufuna ukuseta ixesha elichanekileyo, jonga emazantsi apho ithi Imini yonke, kwaye ucime iqhosha ekunene.
Xa ukhethe umhla womsitho, Cofa ku Kwenziwe, into ongayibona ngasekunene kwesikrini. Ngaphambi kokucofa apha, uya kubona ukuba isangqa esimibala-bala siyavela phezulu kwiscreen, kodwa embindini. Ngokucofa kuyo unokutshintsha umbala weposta kunye nomhla nexesha lomsitho.
Ngoku beka le powusta kwinxalenye yamabali owathandayo. Ungabutshintsha ubungakanani bayo ngeminwe njengoko ubuya kwenza ngefoto okanye isitikha, onokongeza kumabali omsitho. Xa ugqibile, cofa kuThumela ku, kwaye ukhethe ukwabelana ngebali lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » Instagram » Indlela yokuseta ixesha kwi-Instagram kwi-app
Zonke iiHarry Potter zokusebenza kunye nemidlalo ye-Android
Yonke imidlalo yeSonic yokuhanjiswa kwe-Android